Where to find the Best color vision Test? - 💡💻 Iris - Software badbaadinta Eye, Caafimaadka iyo wax soo saarka 🛌👀
Inta badan dadka ay raadinayaan fursad si ay u tijaabiso midabada ay shabakadda.
Nasiib waxaa ma baaritaano indho midab badan online bixiyeen.
laakiin weli, waxaa jira qaar ka mid ah website-online kaas oo qaban baaritaanka aragga midabka online.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad hesho xaaladda dhabta ah oo sax ah ka dibna waa hab fiican si aad u booqato dhakhtar gaar ah qaar ka mid ah.
Imtixaanka bilig bilig midabka dhamaystiran waxaa muhiim ah in ay sameeyaan haddii aad qabto dareen ah in wax khaldan yihiin.
Kuwani waa baaritaano kala duwan oo lagu sameeyo si loo ogaado dhibaatada gebi ahaanba. yar The iyaga ka mid ah waa sida soo socota:
Farnsworth-Munsell 100 cado Test
Ishihara 38 Suxuunta Test
Color Test Arrangement
Baaritaankaan waa mid ka mid ah imtixaanada midabada ugu caansan. Waxay ku salaysan tahay 88 taarikada midab.
Sida caadiga ah, imtixaanka si qof tusi doonaa afar guuto ah 22 taarikada midab isku qasan.
All uu qofku u baahan tahay inaad samayso waa in ay meel ka taagnaa afar saf oo taarikada si sax ah. Taasi oo dhan.
Ishihara The 38 taarikada imtixaanka kaas oo guud ahaan loo yaqaan taarikada Ishihara ayaa la soo bandhigay by Dr. Shinobu Ishihara ka Japan muddo aad u dheer ka hor.
Ever tan iyo markaas baaritaankaan waa inta ugu caansan dunida oo dhan.
Imtixaanka saxan Ishihara ka kooban yahay 38 taarikada pseudoisochromatic kala duwan.
saxan kastaa dhuuntaa line ama tiro ka danbeeya dhibcaha midabo kala duwan. Waa mid ka mid ah habka ugu sahlan oo fudud haddii hubinta in haddii aad ka cabanayso nooc ka mid ah indho midab casaan-cagaaran ama ma.
RGB Anomaloscope waa baaritaan sahlan oo loo isticmaalo in lagu ogaado deficiency midabka casaan-cagaaran.
In imtixaanka this, qofka si fudud u baahan tahay inay u dhigma midabka tagay mid ka mid sax ah iyada oo la isticmaalayo slider hoose weelka.
Haddii qof awoodo inuu u dhigma dhowr iyaga ka mid ah ka dibna waxaa loola jeedaa in ay yihiin xaqiiqo ah colorblind casaan-cagaaran.
imtixaanka heshiis Midabka waa nooca ugu badan ee baaritaanka lagu sameeyay si aad u ogaato deficiency ee colorblindness.
In imtixaanka this, the person simply needs to arrange all the given colors in the correct order of colors.
Xaaladdan oo kale haddii uu qofku dhibaato ka soo nooc ka mid ah indho midabka, ka dibna uu isagu / iyadu diyaarin doona midabada kala duwan marka loo eego qofka qaba aragti midabka caadiga ah.
Iyadoo la isticmaalayo imtixaanka heshiis midabka, mid ka mid ma aha oo kaliya awoodo in uu hubiyo nooca aad deficiency midabada, laakiin sidoo kale ay axmaqnimo kartaan.
Waxaa wax laga xumaado natiijooyinka baaritaanka ma aha gebi ahaanba la isku halayn karo, taas oo mararka qaarkood dib u dhac saldhig u ah dhammaan noocyada kala duwan ee imtixaanka aragga midabka online ah.
Si kastaba ha ahaatee natiijada noqon doonta sare ah iyo tilmaame tayo wanaagsan oo ka mid ah ugu qalabaysan yihiin sax ah midabada, gaar ahaan haddii ay ku qaadan xaalad aan caadi ahayn.
Haddii aad laga helay colorblindness waxaad isticmaali kartaa Vision si aad u aragto oo dhan midabada dhammaataan.
Hubi in aad naftaada ku tijaabiyo in aad colorblind ama aan la Vision ee imtixaanka indho midabka.